Nagarik Shukrabar - डन्ट फर्गेट यस्टर्डे !
शनिबार, ०२ असोज २०७८, ०४ : ३३
डन्ट फर्गेट यस्टर्डे !
शुक्रबार, ०९ फागुन २०७६, ०१ : ३८ | शुक्रवार
अघिल्लो आइतबार, काठमाडाैं जिल्ला अदालत, बिहानको ठीक ११ बजे। प्रहरी भ्यान टक्क रोकियो। कुन थुनुवाको पेसी रहेछ चासो हुने नै भयो। अदालतभित्र बसिरहेका अनि अदालतभित्र जाँदै गरेकाहरुको आँखा सोझियो प्रहरी भ्यानतिर। प्रहरीको भ्यान सफा थियो। सबैले बुझे, कुनै भिआइपीको पेशी होला। नभए कैदीले सफा भ्यान कहाँ चढ्न पाउनु ? बर्दीधारी प्रहरी धेरै, अनि थुनुवा एक जना मात्रै देखिए।
सबैको ध्यान त्यतै खिँचियो। पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा फुत्त गाडीबाट बाहिर निस्किए। उनले पल्याकपुलुक यताउता हेरे। एकजना प्रहरीलाई खुसुक्क केही भने। हातको हाउभाउले प्रहरीको भ्यान फर्काउन इसारा गरेका रहेछन्। भ्यान फर्कियो। महरा एकै झमटमा पहिलो तलामा पुगे। महराको पालो दुई नम्बर फाँटमा थियो। फाँट नम्बर १ मा न्यायाधीश अम्बरराज पौडेल व्यस्त थिए। उनी अर्कै मुद्दा हेरिरहेका थिए। पहिलो फाँटमा पनि बन्द इजलाश नै चलिरहेको थियो।
अब यो फुर्सदिलो समयमा उनी के गरुन् ? ढोकाबाहिर बेन्चमा महरा बसिरहेका थिए, उनलाई वरिपरि प्रहरीले घेरेका थिए। अदालतमा वकिल र सेवाग्राही यताउति गरिरहेका थिए। ती सबैलाई महराले पालैपालो हेरिरहन्थे। महरासँग कोही बोल्दैनथ्यो। एक जना कालो कोट लगाएका एक वकिललाई महराले एकोहोरो हेरिरहे। महरा मसुुक्क हाँसे। ती वकिलले पनि बडो अप्ठेरोको जवाफी हाँसे फर्काए। महरा हात मिलाउन अलि तन्किए। ती काला कोटधारीले हात मिलाउँ कि नमिलाउँ दोधारमा परे। महराले हात दिए। काला कोटधारीले अप्ठेरो मानीमानी हात मिलाए।
‘एम सर’को प्रेमले ल्याएको क्लाइमेक्सले यस्तो अवस्था ल्याएको थियो। उहिले पदमा हुँदा नमस्कार, जयनेपाल र लाल सलाम फर्काउन कति हम्मेहम्मे थियो ! त्यो बेला अभिवादन फर्काउने फुर्सद थिएन। हरे, हविगत !
यसको ठीक एक सातापछि अदालतले महरालाई सफाइ दियो। १ सय ३० दिनको हिरासत र डिल्लीबजार सरदर खोरबाट महरा मुक्त भए। महरालाई लिन उनको कार्यकर्ता डिल्लीबजार पुगेँ।
भित्र पुग्न पाएकाले त चुनावै जितेजसरी फूलमाला अनि खादा ओढाउन भ्याए। महरा पनि मुसुक्क मुस्कुराए। हात हल्लाए। रातो गाडी लिएर उनका सुपुत्र पुगेका थिए। बाहिर हातमा फूलको माला र खादा लिएर बसेका कार्यकर्तालाई चित खुवाउँदै गाडीबाट सरर निस्किगए।
कार्यकर्ताको हातमा रहेको फूलको माला बाहिर ओइलियो तर निकैबेर उनको पक्षमा र एमसिसीको विपक्षमा नाराबाजी भइरह्यो।
एम सर सोच्दा हुन्, एक हप्ताअघि र पछिको अवस्थामा कत्ति धेरै फरक छ ! अब तिनै वकिल एम सरलाई भेट्न खोजे भने महराले के भन्दा हुन्, है ?